Qoorqoor iyo Guudlaawe oo isku gadaamay Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor iyo Guudlaawe oo isku gadaamay Fahad Yaasiin
Siyaasiyiin ay hoggaaminayaan qaar ka mid ah madaxda Maamul goboleedyada ayaa wada qorshe Fahad Yaasiin looga bari-yeelayo Kiiska Ikraan Tahliil, oo ah gabar lagu tuhunsan yahay gacanta NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay xaqiijinayaan ilo xog-ogaal ah, Agaasimaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin, ayaa maalmihii la soo dhaafay waday galaangal xooggan oo ku aadan siduu taageero uga heli lahaa qaar ka mid ah Madaxda gacan-ku-rimiska ah ee uu isagu geyay Dowlad gobaleedyada qaar iyo xubno ka tirsan Musharixiinta.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle, Axmed Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe, oo aaminsan in ayasn noolaan karin la’aanta Fahad, ayaa 48-kii saac ee la soo dhaafay, si weyn uga shaqeeyay in ay RW Rooble, ku qanciyaan marin-habaabinta Kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo muddo ku dhow Saddex bilood lagu tabayo gacanta Hay’adda NISA.
Sida ay sheegayaan howl-wadeenno ka tirsan xaafiiska Rooble, Qoorqoor, Guudlaawe, iyo musharixiin uu kursiga Madaxweynuhu Madax maray, ayaa Rooble, ula tagay qorshe cadaadiska looga yareynayo Fahad, kaas oo ah in lagu qaan-baxo oo kiiska dusha laga saaro qaar ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow isaga, oo ay ku jiraan Kullane Jiis iyo taliyaha NISA ee Gobolka Banaadir Farey.
Tallabada Qoorqoor iyo Guudlaawe, oo ku fashilmay howl-kasta oo laga qaban lahaa Maamullada ay hoggaanka u hayaan, ayaa bannaanka keeneysa in aysan wakiil umadeed waligiid noqon oo ay ahaayeen ergo uu Fahad Yaasiin geystay Jowhar iyo Dhuusamareeb.
“Waxaa hadda la sheegayaa in Fahad waqtiga la siiyay ee 48-da saacadood ah uu ku raadinayo fursad noqon karta tii ugu dambeysay ee uu ku baxsan karo. Waxaa la sheegayaa in maadaama xalay iyo maanta uu adeegsanayay gacanyarihiisa Qoorqoor, caawa uu naf ka dayay oo u qayla-dirsaday adeegihiisa kale ee Cali Guudlaawe oo la leeyahay wuxuu hadda Rooble kula ag meereysanayaa qalqaalo iyo qaddaadiic lacag ah si uu uga dhaadhiciyo inuusan qaadan go'aan Fahad niyadjab ku keeni kara, balse shacabka naruuro u keeni doona”. Ayuu yiri Dhaaley oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn ugu dhuundhuleela siyaasadda.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa la sheegay inuu ka biya diiday qorshaha uu soo dhiibay Fahad, wuxuuna Rooble, u sheegay wakiillada ka socday Madaxtooyada in hoggaanka NISA oo dhan u eedeysan yihiin kiiska Ikraan, bulshada oo dhanna ay indhaha ku heyso tallaabada Xukuumadda.
Rooble waxaa la gudboon in uu arko oo ku go'aanqaato dareenka dadweynaha, isagoo ogaanaya in waxa keliya ee ay dadku naawilayaan asagana dan siyaasadeed iyo mid sumcadeedba u noqon doonta ay tahay inuu tallaabo adag ka qaado Fahad (Aabaha Fidnada).